Grums waa degmada ku ag taalo wabiga Vänern ee dhexbartanka Värmland. Halkaan waxaa dagan ku dhawaad 9 000 oof qof gudaha ama hareeraha Grums, Borgvik, Värmskog, Slottsbron, Segmon iyo Liljedal.
Degmada waxaa ku yaalo nuuc kasto oo degameed. Shirkada guriyaasha ee degmadeed waxaa la dhahaa Grums Hyrebostäder AB. Boggena ayaad ka akhrisan kartaa In kale oo ku saabsan uu gurida Grums.
Afka finland, afka thayland, af carabi, afka iraan, af isbaaniyool, af soomaali iyo af romani.
Halkaan waxaa ku yaalo xafiiska dadweeynaha, maktabad, dukaamo cunto, xafiiska shaqada, farmashiye, ruggag caafimaad iyo daryeelka lkaha. Sido kale halkaan waxaa ku yaalo kaniisado, bankiyaal, goobo isboorti, goobta dabaasha/goobta isboortiga, xarunta-dib uu habeeynta, buur-barafeed iyo goob-baraf iyo in kale oo badan. Degmada dariska ee Karlstad waxaa ku yaalo IKEA iyo dukaanka gacan-labaadka Gengåvan ee Myrorna.
Dugsiga xanaanada iyo guriga xilliga firaaqada waxuu degmada uga yaalaa qeeybo kala duwan. Växtriket ee gudaha Grums waxeey lee dahay kooxax-waalid, dugsi xanaanad oo furan iyo biibito-caruur iyo in kale.
Dugsiyaasha hoose ee degmadeed waxeey ku yaalin Grums (0-3), (4-9), Slottsbron (0-3) iyo Skruvstad (0-3). Dugsiyada madaxabanaan waxeey ku yaalin Borgvik (0-6) iyo Värmskog (0-6). Dugsiyada sare waxeey ku yaalin degmada Karlstad.
Gudaha ama agagaarka Grums waxaad ka dhigan kartaa sfi, dugsiga dadka waa weeyn iyo midka gaarka, jaamacada xirfadaha shaqada iyo Jaamacada Karlstad.
Halkaan waxaa ku taalo rugta caafimaadka Grums (maamulka gobolka Värmland) oo leh xarun daryeelka hooyoyinka iyo xarunta daryeelka caruurta, MVC/BVC. Sido kale halkaan waxaa ku taalo rugta caafimaadka ku cusub Grums ee Legevisitten, Daryeelka ilkaha dad weeynaha iyo qaabilaad dhakhtar ilko oo madaxbanaan.
Markii aad hey'add dowladeed la xariireeysto, degmo iyo daryeelka bukaanka waxaad xaq uu lee dahay caawinaad turjumaan haddii aada ku hadlin ama fahmeeyn iswiidhish. Ka akhriso in dheeraad Xarunta-turjumaanada ee gudaha Karlstad.
Halkaan waxaa ku wado taalo boosteejo tareemeed iyo mid bas oo aad ka raci karto SJ (tareen), Värmlandstrafik (baska-gobolka), Swebus, Karlstadsbuss (baska magaalada Karlstad). Karlstad waxaa ku si taalo Goobta-Duulimaadka Karlstad.
Degmada gudaheed ama meel masaafad uu jirto, waxaa wado joogo shaqo dhiibe yar iyo weeyn. Tusaale ahaan BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, xafiiska degmada Grums, Stora Enso, Maamulka caafimadka ee gobolka Värmland, Maamulka gobolka Värmland, Degmada Karlstad, Jaamacada Karlstad, Värmlandstrafik, Karlstadsbuss, Lilleruds lantbruksskola, Moelven, Löfbergs Lila, IKEA iyo suuqa Bergsviks.
Administratör / koordinator sökes till produktion i Grums Administrativ assistent
Skolsköterska till Jättestenskolan i Grums Skolsköterska
Humana söker en personlig assistent till en fast schemarad på ca. 75% Personlig assistent
Skräddarsytt traineeprogram inom El / Automation Automationselektriker
Tallyman Container , Stora Enso Grums Lagerplanerare
Lärare åk 7 - 9 Ma , Ma / No till Jättestenskolan i Grums Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Speciallärare / specialpedagog till Jättestenskolan i Grums Speciallärare
Nu söker vi Hydraultekniker till vår underhållsavdelning! Hydraulreparatör
Sektionschef PS PM6 Produktionschef, tillverkning
Konsult - Senior Projektledare till BillerudKorsnäs Projektledare, bygg och anläggning
Undersköterska till hemtjänsten i Värmskog Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Vill du jobba som kvalitetsingenjör på vår nya kartongmaskin? Civilingenjör, process, kemiteknik
Specialistläkare , vårdcentralen Grums Specialistläkare
Sektionschef Renseri och lövmassalinjen Produktionschef, tillverkning
Bogga 1 ee ka mid ah 25
Karlstad 25 km
Göteborg 220 km